प्रकाशित: शनिबार, फागुन ८, २०७७, ०९:३७:०० मस्त केसी
तस्बिर स्रोत : सभ्या केसी
बाइकमै आधा नेपाल घुमिसकेकी सभ्या केसीलाई लाग्छ– मनमा आँट, अठोट र आफूमा विश्वास भए गर्न नसकिने केही छैन।
एक महिनाअघिको झिसमिसेमै पोखराकी सभ्या केसीले आफ्नो ड्युक बाइक पुछपाछ पारिन्, आवश्यक सामान राखेको ब्याकप्याक बोकिन् र एक्लै हुइँकिइन् बिर्तामोडसम्म। एकै दिनमा करिब ७०० किलोमिटर लामो यात्रा गरेकी उनले बिर्तामोडमा साथी भेट्टाइन् र लागिन् इलामतर्फ।
स्नातक अध्ययन गरिरहेकी सभ्यालाई बाइकमा लामो यात्रा गर्न औधी मन पर्छ। नयाँ ठाउँ, नयाँ समाज र संस्कृतिसँग साक्षात्कार गर्दा उनलाई जीवनकै एउटा नयाँ पाटो खुलेझैं लाग्छ। त्यसैले अलिकति फुर्सद पाउनुपर्छ, उनी ब्याकप्याक भिर्छिन् र निस्किन्छिन् नौलो यात्रामा।
‘अरु देशमा कस्तो छ थाहा छैन, तर नेपालमा अलिकति पर पुग्नुपर्छ लवज, भाषा, रहनसहन बेग्लै देखिन्छ,’ सभ्या भन्छिन्, ‘यो नयाँपनले मलाई सधैंं रोमाञ्चित बनाउँछ।’
बाइकमा यात्रा गर्दा बेग्लै अनुभव हुन्छ, जुन बस वा अरु गाडीमा यात्रा गर्दा हुँदैन। उनी भन्छिन्, ‘एक खालको विशेष सुविधा हुन्छ बाइकमा। वरपर हेर्दै हुइँकियो, मन लागेको ठाउँमा रोक्यो।’
उनले आफ्नो यात्राको भिडियो बनाउँछिन् र युट्युबमार्फत सार्वजनिक गर्छिन्। त्यसैले उनी युवामाझ ‘मोटो भ्लगर’ सभ्या राइड्सको नामले चर्चित छन्।
स्याङ्जा, फेदीखोला–१ कुपिन्डेमा जन्मिएकी सभ्याले कक्षा ७ सम्म गाउँकै विद्यालयमा पढेकी हुन्। त्यसपछिको विद्यालय शिक्षा पोखरा र कलेज काठमाडौंमा पढ्दैछिन्।
बुवा भारतीय सैनिक, आमा घरव्यवहारमा व्यस्त। बीएससी सीएसआईटी तेस्रो सेमेस्टर पढ्दै गरेकी सभ्यालाई पढाइबाहेक घुमघाम र एडभेन्चरमा रुचि छ। यसमा परिवारको मिठो साथ।
यही रुचिले सभ्यालाई ‘मोटो भ्लगर’ बनाएको छ। उनको युट्युब च्यानल ‘सभ्या राइड्स्’ का सब्सक्राइबर एक लाख ८० हजार पुगेका छन्।
रहरले दिएको साहस
सुरुमा सभ्या स्कुटर चढ्थिन्। तर उनको मन भने बाइकमै थियो। तीन वर्षअघिदेखि उनी ड्युक बाइक चढ्न थालिन्। ड्युकमा पोखरा आसपासका स्थान घुमेर ‘भ्लग’ बनाउन थालिन्। त्यसपछि हो, ड्युकमा हुइँकिने ‘मोटो भ्लगर’का रुपमा सभ्याले चर्चा पाएको।
उनलाई बाइकमा एक्लै लामो यात्रामा जाने रहर पहिलेदेखि नै थियो। त्यो रहर पूरा गर्ने अवसर जुरायो माउन्टेन ड्युको अडिसनले। दुई वर्षअघि माउन्टेन ड्युले एड्भेन्चरस खेलका लागि अडिसन आह्वान ग-यो। सभ्या बुटवल अडिसनका लागि छानिइन्।
बुटवल जाँदा उनले पोखराबाट, पाल्पा हुँदै जाने छोटो बाटो छाडेर चितवनको बाटो रोजिन्। मोटरसाइकलमा उनको पहिलो लामो यात्रा त्यही थियो। पहिलो दिन चितवन र दोस्रो दिन बुटवल पुगिन्।
सभ्या भन्छिन्, ‘पोखराबाट बुटवलसम्मको बाइक यात्रा गरेपछि लाग्यो, अब म जहाँ पनि एक्लै पुग्न सक्छु।’
घरनजिकै केही किलोमिटर यात्रा गरेर भ्लग बनाउने सभ्याले त्यसपछि हो– बाइकमा देश चहार्न थालेको।
अडिसन दिएका ३२५ जनामा छानिएर सभ्याले भोटेकोसीमा -याफ्टिङ, बन्जिजम्प, क्यानोइङ, रक कलाम्बिङलगायत सहासिक खेल खेलिन्। यसले उनलाई थप हिम्मत दियो।
सभ्यालाई अहिले बाइकको ‘प्रोमोसनल’ भिडियो बनाइदिन विभिन्न कम्पनीले ‘अफर’ गर्छन्। उनले टीभीएस, यामाहा, जाभा, केटिएम ड्युकलगायतका बाइकको प्रोमोसनल काम गरिसकेकी छन्। बेनेलीसँग पनि सम्झौता भएको छ।
सभ्याले बिर्तामोडको यात्रा सुरु गर्नु केही दिनअघि मात्रै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको आक्रमणमा परी मोटरसाइकलमा सवार महिलाको ज्यान गएको थियो। परिवेश खासै थाहा नभएको हाइवेमा एक्लै बत्तिँदा उनलाई अत्यास नलागेको भने होइन। ‘तर, त्यो यात्रा सम्झँदा अहिले झन् रोमाञ्चित हुन्छु,’ सभ्या भन्छिन्।
‘यात्रामा बेलाबेला मन आत्तिए पनि अरु अप्ठ्यारो केही भएन तर निकै थाकें,’ पोखरा–बिर्तामोडको यात्रा सम्झिंदै उनी भन्छिन्। थकानको थप कारण थियो– महिनावारी। बीचबाटोमा उनलाई महिनावारी भयो। ‘यस्तो बेला असाध्यै पेट दुख्छ, शरीर गल्छ,’ उनी भन्छिन्। तर, पनि उनले बिहान घरबाट राखेको लक्ष्यअनुसार बेलुका बिर्तामोड पुगेरै छोडिन्।
नेपालका राजमार्गमा खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक चिह्न र शौचालय अभाव अधिकांशले भोग्ने समस्या हुन्। तर, सभ्याले महिला भएकै कारण थोरै थप असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्छ।
‘केटी भन्ने थाहा पाए भने केही गाडीको चालकले नजिकैबाट ओभरटेक गर्ने, साइड नदिने, समस्या छ नै’, सभ्या भन्छिन्, ‘कतै बाइक रोकेर बिसाउँदा पनि अचम्मसँग हेर्न थाल्छन्।’
त्यसो भए एक्लो महिला यात्रीका लागि नेपाल जोखिमपूर्ण छ?
‘त्यस्तो त छैन, कयौँपटक रातिराति एक्लै हिँडेकी छु। आधा नेपाल बाइकमै घुमिसकें,’ सभ्या भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीं अलिक असहज जस्तो लाग्छ नत्र, सहयोगी नै धेरै भेटिन्छन्।’
उनको अहिलेसम्मको अनुभवमा नेपाल प्राकृतिक रुपमा मात्रै होइन सांस्कृतिक रुपमा पनि धनी छ, केही अपवादबाहेक सहृदयी छ।
यात्राका केही नमिठा अनुभव पनि छन् उनका। केही दिनअघि हेटौंडामा बास बस्दा सुरुमा कोठाको १५ सय भनेको होटलले कोठमा छिरेलगत्तै २५ सय भन्यो। राति अबेर भइसकेको हुँदा उनी राजी भइन्। तर, होटलका कर्मचारी विभिन्न बहानामा ढोका ढकढकाउन आइरहे। खाना खाएर सुत्नै लाग्दा बिल लिएर आए।
उनी भन्छिन्, ‘एकपटक रिस उठिसकेको थियो तर, सम्हालिएँ।’ आफूमा परिआए जे पनि पार लगाउँछु भन्ने हिम्मत आउने र धेरै अवस्थामा अलिक कडा मिजास देखाएपछि अनावश्यक चासो देखाउनेहरू आफैँ पछि हट्ने गरेको उनी बताउँछिन्।
एउटी केटी लामालामा यात्रामा एक्लै निस्केको देखेर निर्दोष भावले ‘बाफ रे बाफ... त्यति टाढाबाट एक्लै...’ भनेको सुन्दाचाहिँ उनलाई रमाइलै लाग्छ।
धेरैले साहसी भनेर प्रशंसा गर्छन्। पहिलो पटक भेटेकाले मिठो आतिथ्य दिएको, सहयोग गरेको घटना कति छन् कति। यात्राकै क्रममा उनले थुप्रै प्रशंसक पनि भेट्छिन्।
‘सकारात्मक रेस्पोन्स यति धेरै पाउँछु कि, त्यसको तुलनामा नकारात्मकता नगन्य भइदिन्छ,’ उनी भन्छिन्।
यात्रामा उनलाई भेट्ने उनकै उमेरका केटीको प्रतिक्रियाचाहिँ कस्तो रहन्छ होला त?
समाजले छोरीलाई सधैं सुरक्षा छाताभित्रै राखेर जोगाउने भन्दा पनि बलियो र आँटिलो बनाएर आफैं हिँड्न सक्ने बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सभ्यालाई आफूले गर्न नसक्ने काम केही छ जस्तो लाग्दैन। ‘रहर हुनुप-यो, मन हुनुप-यो गर्न नसक्ने भन्ने केही छैन’, उनी भन्छिन्।
अरुको कुरा सुन्ने र के भन्लान् भनेर चिन्ता गर्न नहुने सभ्या बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘निश्चित उद्देश्य राखेर निरन्तर लागिपरे पूरा गर्न सकिन्छ। सोच्नेबित्तिकै केही हुँदैन।’
हिम्मतिलो बन्नका लागि ससाना कुरा ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भन्छिन्, ‘नजिकै जाँदा साथी नखोज्ने, आफ्नो काम आफैं गर्ने, ठक्कर खाँदै सिक्ने त्यही त हो।’
सभ्यालाई अब मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका गाउँ घुम्न मन छ। गाउँगाउँ पुगेर त्यो समाज र विशेष गरी महिलाका समस्या बुझ्नु छ। आफ्नै उमेरका केटीहरूसँग साक्षात्कार गर्नु छ।
उनी भन्छिन्, ‘जता पुगे पनि महिलाका समस्या उस्तैउस्तै देखेकी छु, त्यसबारे डकुमेन्ट्री बनाउने मन छ।’
ठेक्कामा जग्गा जोत्ने सांसद